किन १६ करोड घाटा ब्यहोर्नु पर्यो गोबिन्दालाई? यस्तो रहेछ बास्तविक कारण – ramechhapkhabar.com
किन १६ करोड घाटा ब्यहोर्नु पर्यो गोबिन्दालाई? यस्तो रहेछ बास्तविक कारण
बलिउड अभिनेता गोबिन्दाले करिब १६ करोड घाटा ब्यहोर्नु परेको खुलासा गरेका छन् । उनले पछिल्लो एक अन्तरवार्तामा यस्तो खुलासा गरेका हुन् ।
साथै केहीले आफ्नो करियर पनि समाप्त पार्न खोजेको बताएको छन् । उनले भने, ‘पछिल्लो १४–१५ वर्षमा मैले पैसा लगानी गरेँ र मैले करिब १६ करोड घाटा बेहोर्नुपर्यो । केही मानिसहरूले ममाथि असाध्यै नराम्रो व्यवहार गरे । यिमध्ये केही इन्डष्ट्रिका मानिसहरू पनि थिए । मेरो फिल्मले थिएटर पाएन र उनीहरु मेरो करियर समाप्त गर्न चाहन्थे, जुन भएन । अब म सन् २०२१ मा धमाकाका लागि प्रतीक्षा गरिरहेको छु ।’
उनले बलिउडमा आफुविरुद्ध षड्यन्त्र रचिएको पनि बताएका छन् । उनले भने, ‘भनिन्छ नि आफ्नो पनि पराई हुन्छन् । यदि भाग्य तपाईंको पक्षमा छैन भने तपाईँका आफ्ना मानिसहरू पनि तपाईं विरुद्ध हुने छन् ।’
९० को दशकमा गोबिन्दा सिनेमाघरमा राज गरेका थिए । यद्यपि, पछिल्लो केही वर्षमा उनका जुन फिल्म रिलिज भए त्यसले खासै राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । गोबिन्दाले यस अघि पनि आफ्नो करियर समाप्त गर्ने कोसिस गरिएको भन्नेबारे जानकारी दिएका थिए ।